Na ntinye: Wepu igbe ndenye aha gi na Ecommerce Platform a Martech Zone
Otu oke iwe anyị na-ahụ na ecommerce bụ ndenye aha igbe onyinye. Igbe ndị debanyere aha bụ onyinye na-akpali akpali… site na ngwa nri, ngwaahịa agụmakwụkwọ ụmụaka, na nkịta na-emeso ens iri nde ndị na-azụ ahịa debanye aha maka igbe ndenye aha. Oge, nnabata, ihe ọhụụ, ihe ijuanya, iche, na ọnụahịa bụcha njirimara ndị na-ebugharị igbe ndenye aha. Maka azụmaahịa ecommerce okike, igbe ndenye aha nwere ike ịba uru n'ihi na ị gbanwere ndị na-azụ ahịa otu oge ka ha bụrụ ndị ahịa ugboro ugboro.
Ndenye aha eCommerce ruru ihe ruru ijeri $ 10 (ewepu Amazon Prime na nhọrọ "ịdenye aha ma chekwaa").
Mmanụ nke McKinsey
Imirikiti ngwanrọ ndenye aha na-emeso ndenye aha dị ka akụkụ nke azụmahịa gị: ha na-akwado ya, mana ọ na-abụkarị ihe na-adịghị mma ma ọ naghị etinye ngwa ngwa na azụmahịa gị ma ọ bụ weebụsaịtị dị. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ha abụghị ndenye aha-nke mbụ, kama ọ bụ n'ọma ahịa-nke mbụ ma ọ bụ onye na-ewu weebụsaịtị.
Enwere ọtụtụ mgbagwoju anya na igbe ndenye ikike e-commerce. Onyinye dị ukwuu na-etinye njikwa akaụntụ, nhọrọ ndị ahaziri aha ya, arịrịọ oge, nnọchi, nnọchi akpaaka, yana - n'ezie nhazi ịkwụ ụgwọ maka ndebanye aha. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nyiwe e-commerce na-ewu ewu anaghị etinye ike ndị a na nyiwe ha… chọrọ njikọta nke atọ ma ọ bụ mmepe omenala iji mee ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
N'okpuru: Ndepụta Ecommerce Platform
Ana m enyere ụlọ ọrụ aka ugbu a ịchọpụta nhọrọ ha niile n’ichebe ọrụ ha na ala ma chọpụta Jiri obi umeala. Jiri obi iru ala na-enye igbe igbe ndenye ndị a dịka isi ihe nyiwe ha:
Billgba ụgwọ ndenye aha - Were ugwo si n'aka ndị ahịa gị na ugboro ugboro na-akpaghị aka na-enweghị iji aka mee ihe ọ bụla. Ozugbo e debanyere aha ndị ahịa gị, n'ụzọ doro anya ga-elekọta ndị ọzọ ka ị nwee ike izu ike n'atụghị egwu ịmara na ego gị na-abịaghachi na-abịa n'izu, ọnwa, ma ọ bụ afọ na-abịa.
Wepụ ụbọchị & debe ụbọchị mmegharị - Kwụọ ndị ahịa gị niile ụgwọ otu ụbọchị kwa ọnwa, dozie ụbọchị mbepụ maka ụbọchị mbupu gị, ma họrọ ụbọchị e zigara ndị ahịa gị. Inggba ụgwọ na mbupu dabara na azụmahịa gị chọrọ.
"Mee-a-igbe" na ndị ọzọ na mgbagwoju ịgba ụgwọ mkpa - Chọrọ ka ndị ahịa gị hazie ndebanye aha ha site na ịhazi nhọrọ, ma ọ bụ họrọ ngwaahịa dị n'ime ụgbọ mmiri ha? Elepụ anya n'ihu, Subbly nwere ụlọ ọrụ nyocha ọhụụ pụrụ iche iji nye ohere maka ndebanye aha maka ndị ahịa gị ma nye gị ohere ịnye ahụmịhe omenala.
Customizable ịgba ụgwọ na mbupu cycles - Monthly, Weekly, Kwa afọ, Quarlyly and beyond! Gwakọta mbupu na ịgba ụgwọ ịgba ụgwọ iji kwado mkpa ịgba ụgwọ gị na mbugharị ugboro ole. I nwekwara ike ikwe ka ndị ahịa gị họrọ ihe masịrị ha n’oge ndenye ọpụpụ.
Paymentkwụ ụgwọ nkwụghachi agaghị - paymentsghara ịkwụ ụgwọ kaadị na-akụda mmụọ! Involuntary churn nwere ike belata na anyị wuru na-okpu ugwo mgbake ngwaọrụ na akpaaka.
Oge ikpe - Kwe ka ndị ahịa gị nwalee igbe ndenye igbe nlele maka obere ego ma mee ka ha megharịa na usoro dị mkpụmkpụ karịa nke nkịtị na ọnụahịa zuru ezu nke ndenye aha nkịtị.
Oge itinye aka - Kpochapu oge na oge nkwa. Nye ndenye aha ọnwa 12 na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa ma nye mbelata iji kpalie ndị ahịa ime.
Nwere ike jikọta na ụlọ ahịa dị na Wix, Shopify, Ohia, WooCommerce, Weebly, ma ọ bụ tinye ya na weebụsaịtị gị ugbu a.
Ozo bu uzo ntinye akwukwo e-commerce. Tinyere onye na-ewu ihe na ebe nrụọrụ weebụ, ndenye ọpụpụ na-arụ ọrụ, mbupu na ntinye ọnụ, ngwa ahịa & ngwa ọrụ, njikwa ndị ahịa (CRM), na atụmatụ ndị ọzọ… ọ bụ nnukwu ikpo okwu na-aga n'ihu ịkwalite onyinye ya.
Gbalia na nkea n'efu
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta maka Jiri obi umeala N’isiokwu a dum.
Tags: CRMecommerce n'elu ikpo okwuụlọ ahịasquarespacejiri obi umealandenye aha igbendenye aha igbe n'elu ikpo okwuọrụ ndenye ahawee jirikwa yawixwoocommerce